Tsamba Yechipiri Kuna Timoti 2:1-26
Udza mashoko aya varume vanokwanisa kudzidzisa vamwe (1-7)
Kutsungirira kutambudzirwa mashoko akanaka (8-13)
Bata shoko raMwari zvakarurama (14-19)
Tiza kuchiva kweudiki (20-22)
Zvaunofanira kuita kana uchipikiswa (23-26)
2 Saka iwe mwanangu,+ ramba uchiwana simba kuburikidza nenyasha dziri muna Kristu Jesu; 2 uye zvinhu zvawakanzwa kwandiri zvichitsigirwa nezvapupu zvizhinji,+ zvipe vanhu vakatendeka, avo vachanyatsokwanisawo kudzidzisa vamwe. 3 Semurwi akanaka+ waKristu Jesu, bvuma kusangana nematambudziko.+ 4 Hapana munhu anoshanda semurwi anozvibatikanisa mumabasa ekutengeserana eupenyu,* kana achida kufarirwa neanenge akamupinza basa semurwi. 5 Uye kunyange mumitambo, munhu anokwikwidza asingatevedzeri mitemo yacho haapiwi korona.+ 6 Murimi anoshanda nesimba ndiye anofanira kuva wekutanga kudya zvibereko. 7 Ramba uchifunga zvandiri kutaura; Ishe achaita kuti unzwisise zvinhu zvese. 8 Yeuka kuti Jesu Kristu akamutswa kuvakafa+ uye aiva mwana waDhavhidhi,*+ maererano nemashoko akanaka andinoparidza,+ 9 anova ndiwo ari kuita kuti nditambure uye ndisungwe sekunge ndakapara mhosva.+ Kunyange zvakadaro, shoko raMwari harina kusungwa.+ 10 Ndokusaka ndichiramba ndichitsungirira zvinhu zvese ndichiitira vakasarudzwa,+ kuti ivowo vawane ruponeso kuburikidza naKristu Jesu, pamwe chete nekubwinya kusingaperi. 11 Mashoko aya ndeechokwadi: Kana takafa pamwe chete, tichatoraramawo pamwe chete;+ 12 kana tikaramba tichitsungirira, tichatongawo pamwe chete semadzimambo;+ kana tikamuramba, iye achatirambawo;+ 13 kana tisina kutendeka, iye anoramba akatendeka, nekuti haangazvirambi. 14 Ramba uchivayeuchidza zvinhu izvi, uchivarayira* pamberi paMwari kuti varege kuitisana nharo pamusoro pemashoko, zvinova zvinhu zvisina kana zvazvinobatsira, nekuti zvinokanganisa* vaya vanenge vachiteerera. 15 Ita zvese zvaunogona kuti uzvipe kuna Mwari semunhu waanofarira, mushandi asina chekunyara nacho, anobata shoko rechokwadi zvakarurama.+ 16 Asi ramba kutaura kusina zvakunobatsira kunoshatisa zvinhu zvitsvene,+ nekuti kunoita kuti vanhu varambe vachitowedzera kuita zvinovengwa naMwari, 17 uye shoko ravo richapararira seronda rinonyenga. Vamwe vavo ndiHimeniyo naFiretusi.+ 18 Varume ava vakatsauka pachokwadi, vachiti rumuko rwakatoitika,+ uye vari kuparadza kutenda kwevamwe. 19 Pasinei naizvozvo, faundesheni yaMwari yakasimba inoramba iripo, iine chisimbiso* ichi chekuti: “Jehovha* anoziva kuti vake ndevapi,”+ uye kuti, “Munhu wese anodana zita raJehovha*+ ngaarambe zvinhu zvisina kururama.” 20 Muimba yakakura hamungowanikwi midziyo yegoridhe neyesirivha asi munowanikwawo yemiti neyeivhu, uye mimwe ndeyebasa rinokudzwa asi mimwe ndeyebasa risingakudzwi. 21 Saka kana munhu akaramba ari kure neyebasa risingakudzwi, achava mudziyo webasa rinokudzwa, wakatsveneswa, unobatsira muridzi wawo, unoshandiswa pamabasa ese akanaka. 22 Saka tiza kuchiva kweudiki, asi tevera kururama, kutenda, rudo, rugare, pamwe chete nevaya vanodana panaShe nemwoyo wakachena. 23 Uyezve ramba nharo dzisina basa uye dzisina musoro,+ nekuti dzinokonzera kukakavadzana. 24 Nekuti muranda waShe haafaniri kukakavara, asi anofanira kuva munyoro kuvanhu vese,+ anokwanisa kudzidzisa, anozvidzora kana akatadzirwa,+ 25 anorayiridza neunyoro vaya vasingabvumi zvaanodzidzisa.+ Zvimwe Mwari anogona kuita kuti vapfidze zvivi zvavo,* vowana ruzivo rwakarurama rwechokwadi,+ 26 uye vanogona kupengenuka, vopukunyuka mumusungo waDhiyabhorosi, sezvo anga akavabata vari vapenyu kuti vaite zvido zvake.+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “anozvibatikanisa mumabasa ezuva nezuva.”
^ ChiGir., “mbeu yaDhavhidhi.”
^ ChiGir., “uchivapupurira.”
^ Kana kuti “zvinoparadza.”
^ Kana kuti “vachinje mafungiro avo.”